Amaqela eLFA awavum’ ugoba uphondo
You are at:Home»SPORT»News»Amaqela eLFA awavum’ ugoba uphondo
Sophia Stars took on Young Killers at the JD Dlepu Stadium. Photo: Chris Totobela
By Grocott's Mail Reporters on	 April 12, 2019 News, Results, SPORT
Imozulu ebizole nasebukhweni bezinja yange mpelaveki edlulileyo, ivumele abathandi bebhola elikhulu ukuba babelukrozo ukuya kwibala las JD Dlepu. NgoMgqibelo kwimidlalo yabo bangaphantsi kweminyaka elishumi elinesixhenxe iYoung killers izenzele kwiLakhenathi ngamanqaku amathathu kwelinye, logama yona iGrahamstown United ihluthe intlaka emlonyeni weCameroon ngamanqaku amathathu kwamabini.
ILove and Peace ayigalelekanga kumdlalo wayo neFingo United. Kwimidlalo yoompondo zihlanjiwe iRiebeck City iqengqele iNewtown City. Kumdlalo obuvutha amadangatye nobunika umdla kubalandeli, iJacaranda Aces eqale kakuhle kulamidlalo yokuqala phambi kokuba iphuncukelwe ngamavili kwinqwelo yayo, ibuyise isidima sayo ngethuba ibetha iAttackers kabuhlungu ngamanqaku amathathu kwamabini.
Omabini lamaqela bezijaca kulomdlalo esithi maxhalanga ndidleni ngoba sendonakele kakade, nto leyo ebangele abalandeli kubenzima uhlala phantsi ngakumbi kulamizuzu elishumi yokugqibela. IMakana Pillars engenantanga mvanje nethande ukutywatyusha konke okushukumayo phambi kwayo, ibhaxabule iLove and Peace ngamanqaku amane kwamabini, logama iNewseekers izixhwithele kwiJoza Callies ngamanqaku amabini eqandeni.
ICameroon intywilisele emanzini iFuture Stars ngamanqaku amathathu kwelinye, logama yona iYoung Killers ifuthanisele iSophia Stars ngamanqaku amane kwelinye. NgeCawa kuqale imidlalo yabanga phantsi kweminyaka elishumi elinesixhenxe kwakhona, nalapho iMakana Pillars ibethe iAfrican Spears ngamanqaku amane eqandeni.
ISakhulutsha izingombele iAttackers ngamanqaku amane eqandeni nayo, logama iintshatsheli ezikhuselayo iJacaranda Aces ibambene ngeqanda neSophia Stars. IGolden Brothers iqengqele iCity Pirates.
Kwimidlalo yamaqela amakhulu iFingo United ibambene ngenqaku elinye macala neYoung Neighbours logama iGrahamstown United ingqengqise ngophotho i6SAI ngamanqaku amabini kwelinye kumdlalo obushushu ngeyona ndlela, nalapho i6SAI ifumene amathuba amaninzi okugqiba lomdlalo kwakwisiqingatha sokuqala, kodwa ukungxama nokutatazela kwabadlali babo phambi kweepali kubachanile kakhulu.
IMighty Chiefs iqengqele ISakhulutsha engafikanga ebaleni nanjengoko ibihlangene nabo basemagunyeni kulawulo lwebhola. Othethela iMakana LFA uAkhona Heshu ungqinile ukuba bekuhlangenwe kuzanywa ukusonjululwa lenyewe, kodwa ke akukabikho sigqibo sithatyathiweyo nanjengoko kuzophinda kuhlanganwe kumhla ongekaziwa okwangoku.